Howlgalo Maalintii Labaad ka socda Baladweyne oo Dad lagu qabqabtay – SBC
Howlgalo Maalintii Labaad ka socda Baladweyne oo Dad lagu qabqabtay
Maalintii Labaad magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka soconaya Howlgalo bal balaaran oo ay ciidamada Amaanka Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Dalka Jabuuti ee Amisom ka tirsan ay ka wadaan gudaha Xaafadaha Magaaladaas.
Howlgaladan oo Habeen Labaadkii ka bilowday xaafadaha magaalada Baladweyne ayaa waxaa lagu qab qabtay dad loogaga shakiyay in ay falal amaan daro ah ka geysan rabeen gudaha Baladweyne, qalab u badan waxyaabaha qarxa oo xaafadaha qaar laga soo qabtay.
Ciidamadu waxay Maanta Guri guri u galayeen Xaafada lagu magacaabo Buunda weyn ee magaalada baladweyne iyadoo ay ku qabqabteen dad la sheegay in ay Hub ku heysteen xaafadaasi iyagoo ku qaatay gaadiidka Ciidanka.
Dhinaca kale Maamulka gobolka Hiiraan ee Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Amaanka iyo kuwa Amisom ay sii wadayaan Howlgaladan ayna ku qab qabanayaan dadka iyagu falalka amaan dari ku howlan ee ku sugan magaalada .
Sikastaab ha ahaatee Dadweynaha gobolka ayaa howlgaladan ka muujiyay cabsi iyagoo dhalinyaradu ka cabsi qabaan in shaki iyo tuhun laga qabo daraadeed ay ciidanku xabsiga dhigaan.